Real Madrid & Barcelona oo isku agdhacay ka dib lugtii 1-aad ee Super Cup (Sawiro) – SBC
Real Madrid & Barcelona oo isku agdhacay ka dib lugtii 1-aad ee Super Cup (Sawiro)
Labada kooxood ee kala haysta koobka Copa De Rey & La Liga ayaa caawa fooda isku darey garoonka kooxda Real Madrid ee Santiago Bernabeu waxaana ciyaartan oo loo tartamayo koobka Super Cup ay aheyd mid si weyn labadan kooxood ee xifaaltanka dhanka kubada cagta uu ka dhaxeeyo ay si weyn isagu diyaarinayeen.
Inkastoo Barcelona ay caawa la gashay barbar dhac kooxda Real Madrid hadana waxaa caawa isbadal weyn ku yimid qaab ciyaareedkii kooxda Barcelona iyadoo guud ahaan kubada ay maamulanaysay Real, waxaana loo aanayn karaa iyadoo laacibiin muhiim ah ay Barcelona caawa ka maqnaayeen kuwaasi oo dhaawacyo qaba sida Xavi oo dhexda isku hayey iyo Puyol oo daafaca ah kooxdana Captain u ah.
Wareega koowaad ee loo tartamayo koobka Super cup waxaa Barcelona lagaga naxsadey qaybtii hore ee ciyaarta gool uu ka soo shaqeeyey xidiga Banzema waxaana shabaqa Barcelona ku hubsadey weeraryahanka Mesut Ozil.
Laakiin mudo ka dib Barcelona waxay isku dayday inay ciyaarta la qaybsato Real waxaana kubad uu si hoose ugu xadey Messi weeraryahanka David Villa uu ku hubsadey shabaqada Real taasi oo xaga sare uu ka siiyey goolhaye Ikar Casiles.
Isla qaybtii hore ee ciyaarta waxaa gool xarago leh oo lala soo dhexmarey daafaca Real shabaqa ku hubsadey weeraryahanka reer Argentien ee qarankiisa ku liita Leo Messi kaasi oo aamusiyey shanqartii iyo qayladii caawa ka taagneyd garoonka Bernabeu waxaana qaybtii hore ee ciyaarta ay ku soo dhamaatey 2-1 oo ay Barcelona ku hogaaminayso.
Qayntii labaad ee ciyaarta ayaa la isku laabtey waxaana tababare Jose Mourinho oo wiilashiisa dhagta ugu soo sheegay wixii uu ku soo arkay qaybta hore ee ciyaarta iyo halka ay ka gali karaan Barcelona waxaana laacibka khadka dhexe Xabi Alonso uu keenay goolkii barbar dhaca taasi oo neefta ka soo bixisey taageerayaasha kooxda caasimada ka dhisan.
Inkastoo weerar & weerar celis ba’an la isku qaaday hadana Real Madrid waxay ka soo laabatey dhuunta Barcelona ka dib markii xidiga reer Portugal Ronaldo uu birta ku qaaday kubad laad xor ah (Free Kick) taasi oo dhabrka ka jabin laheyd goolhaye Valdes oo cirka isku qaaday laakiin nasiibku uu u hiiliyey oo ay birtu caawisay.
Wareega labaad ee ciyaarta ayaa la sugayaa waxaana la tagayaa guriga Barcelona ee Nou Camp waxaana la filayaa in ciyaartaasi Barcelona ay safro 24-ka jirka Cesc Febreges oo aan waligiis ku ciyaarin garoonkaasi oo uu ka soo tagey 16 sano isagoo jira.